STRAWBERRY "VIMA ZANTA": SHARAXAADA KALA DUWAN, TIGNOOLAJIYADA BEERAHA EE BEERISTA, DARYEELKA IYO BEERAHA BERRY EE BANNAANKA U FURAN (SAWIR) - STRAWBERRIES
Sida loo abuuro oo u koro strawberries (strawberries beerta) noocyo "Wima Zanta"
Large-fruited iyo waqti isku mid ah strawberry si fudud-u-daryeel waa riyo ah ee deggan xagaaga kasta. Qofka oo kaliya ayaa doonaya inuu ku cuno miro waawayn, koray gacmahooda, halka kuwo kale ay xiiseynayaan iyaga sababo ganacsi. Iyada oo hadafyadaas oo kale, saplings of noocyo hybrid ah ee taranta Yurub waxaa sida caadiga ah iibsaday, kuwaas oo ay jiraan sidoo kale waxaa jira "horyaalka". Aynu ogaanno mid ka mid ah khadadkaas - kala duwanaanta "Wima Zant".
Kala duwanaanta noocaas ah waxaa loo tixgeliyaa isugeyn. - "Wima Zanta" ayaa u muuqata natiijada doorashada ee "Elsanta" iyo "Crown", taas oo horay u soo saartay sifooyinka galka.
In muuqaalka, kuwaasi waa kuwa awood leh oo dhexdhexaad ah ay duurka u leh afkoda dherer dhexdhexaad ah.
Mid ka mid ah sifooyinka - caleemaha cagaaran oo cagaaran, duubnaa qaabka doonta.
Maqaarka jaangooyaha ee dhumuc dhexdhexaad ah ayaa ku yaala heerka caleemaha oo hoos u soo dhacaya sida midhaha bislaadaan.
Bakeerka ayaa si firfircoon u garaacaya, sidaa daraadeed ma jiraan wax dhibaatooyin ah oo dhalmo ah.
Noocyada kale ee "Wima Zanta" waxay u taagan tahay qiyaaso miro leh, adkeysiga abaarta wanaagsan iyo adkaysiga jiilaalka dhexdhexaad ah.
Soo ogow sifooyinka Florence, Marmalade, Bereginya, Darselect, Vikoda, Zephyr, Roxana, Cardinal, Tristan, Black Prince, Mara de Bois "," Alba "," Honey "," Clery "," Chamora Turusi "," Zenga Zengana "," Marshal "," Lord "," Ruush Size ".
Kuwa kori kara strawberry this wacaan faa'iidooyinka hybrid:
dhadhanka gaarka ah ee berry, taas oo si fiican u kala saaro midhaha kale ee khadadka waaweyn;
duurka ma aha "gubi" qoraxda iyo daryeel caadi ah si deg deg ah u dulqaadka abaaraha (taas oo muhiim u ah gobollada koonfureed);
caabbinta xooggan ee fusarium, caaryada cawl, verticillus iyo cudurrada kale;
Kobcinta xooggan ee whiskers waxay kuu ogolaaneysaa inaad bilowdo duur-joog si loogu iibiyo.
Waa muhiim! Markaad dalbato qalab beerto u hubso inaad sheegto waxaad u baahan tahay dhab ahaan "Wima zanta"oo aan ka hadhin laynka "aabaha" "Elsanta" - Waxaa jiray xaalado markii ay isku dhaceen.
Dhammaan tani waa mid fiican, laakiin aan lahayn qalad, sida:
baahida loo qabo daryeel joogto ah (gaar ahaan waraabinta, maqnaansho dheer oo ah nooca berry noqda iftiin iyo gudaha gudaha);
gaadiidka aan loo baahnayn - gaadiidka dheer iyo badanaaba u wareejinta weel cusub ayaa ka reebaysa midhaha qaabkeeda quruxda badan iyo dhadhanka;
Dareenka xagta uumi-xayreedka: haddii uu jiro meel ballaaran oo caabuq ah, dhawridda duurka waxay noqon doontaa hawl aad u adag.
Soo koobidda xaqiiqooyinkan, waxay soo baxday in kala duwanaanshahan uu ku habboon yahay milkiilaha xagaaga ee iibiya alaabooyinka suuqyada dhow iyo khibrad qaar ka mid ah strawberries sidan oo kale. Inkasta oo beerista ay si firfircoon uga shaqeysiisay iyo kuwa bilowga ah, kuwaas oo soo jiidanaya miro ballaaran.
Astaamaha nooca berry iyo dhalidda
Marka lagu daro cabbirka qadarka ah, miraha kuwan ayaa sidoo kale midabkiisu yahay midab casaan leh oo aan lahayn qarxan.
Waqti ka dib, qaabkoodu waa isbeddelaa: haddii caleenta goosashada ugu horreysa ay la mid tahay kubad joogto ah, ka dibna mustaqbalka waxay noqdaan kuwo balaadhan, oo qoortana yar yarna waa loo taagaa labada geesood.
Jirka waa mid aad u casiir leh oo aan aad u dhicin (inkastoo aadan wici karin jilicsan).
Laakiin waxa ugu muhiimsan - dhadhanka: taajir ah, macaan oo aan caadi ahayn, oo leh dareen aan la dareemin.
Ma taqaanaa? Strawberry waa berrinka kaliya ee abuurka la soo saaray.
Marka la eego wax soo saar, noocyada kala duwan waxaa loo aaneynayaa in hore u bislaaday (iyo, si sax ah, dhexdhexaad ah). Fruiting wuxuu dhacaa dhammaadka May - bilowga Juun.
Waqtigaan, ilaa 600-800 g ayaa laga saarayaa baadiyaha (iyadoo leh miisaanka celceliska hal berri oo ah 40 g).
Saamaynta ugu sarreysa waa 2-3 sano ka dib marka la beerto, halka wareegga wax soo saaru uu yahay 4 sano - ka dib marka ay berry noqdaan kuwo muuqda oo gacmanaya oo lumiya dhadhanka.
Dhalashada waxay si toos ah ugu xiran tahay meesha beerashada iyo daryeelka: sifooyinka muuqaalka, qiimaha 8-15 t / ha ayaa lagu sheegay. Hase yeeshee, waxqabadka ayaa muujinaya in ciyaalkayagu uu saxan yahay si looga hadlo tirada ugu badan ee 8-10 t / ha (taas oo ah, 80-100 kg oo ah nooca berry ah ayaa laga goostay goobta si fiican loo dhajiyay oo leh "weave".
Agrotechnics ee sii kordhaya iyo daryeelaya strawberries
Tirooyinkan, oo ay weheliyaan nooca quruxda badan ee miro badan oo xiiso leh. Laakiin xitaa ka hor intaan la iibsan walxaha beerto waxa ay yaqaanaan agrotechnics ee kala duwan iyo xeerarka daryeelka ee khadka duurka "Wima Zanta."
Baro sida loo koro strawberries iyadoo la isticmaalayo farsamada Finnishka, teknoolajiyada Dutch.
Geedo caafimaad leh - sal u ah goosashada mustaqbalka. Si aad u iibsato waxyaabo tayo sare leh, waa inaad fiiro gaar ah u leedahay daqiiqadahaas:
xaaladda guud ee naaxinta - nuqulada jilicsan ayaa isla markiiba baaba;
tirada iyo kalsoonaanta caleemaha - geedo caafimaad leh oo ka baxsan meesha waa inay ahaataa ugu yaraan 3 caleemo cagaaran oo aan dhaawac lahayn, dhibco iyo xadgudubyo kale;
xajmiga xididada - haddii aysan ka yarayn 6-7 mm dhexroor iyo aan lahayn raad leexasho ama dhibco xanuun leh, markaa waxaad leedahay seedling caafimaad leh;
ha iloobin wadnaha iyo xididada xididada - baaro iyaga maqnaanshaha kalluunka iyo prisohlosti, iyo hubinta in aysan jirin, iyo dhererka xididka furan ee ka badan 7 cm, waxaad si ammaan ah u iibsan kartaa geedo sida.
Waa muhiim! Dalbashada geedo iyada oo loo marayo adeegyada gudbinta gawaarida (habkani wuxuu noqdaa mid sii caan ah) wuxuu macno u yeeshaa oo keliya xilliga diiran.
By habka, oo ku saabsan xididada. Burooyinka waxaa inta badan lagu iibiyaa dheriyo peat ah. Xaaladdan oo kale, xididada waa in ay ahaato meel banaanka ah. Ugu dambeyntii si loo hubiyo daacadnimadooda, si taxadar leh u qaado cawska caleen caleen ka soo saar weelka. Sicirada la xaqiijiyay ee iibiya alaabta tayada leh uma badna inay ka soo horjeedaan imtixaankan fudud.
Geedo la iibsaday waxay u baahan yihiin inay isku diyaariyaan beeritaanka. Haddii beeritaanka guga la dhaqmo, caws ubaxa ugu horeeya ayaa la saaraa - tani waxay u oggolaaneysaa xididada in ay si deg deg ah u dhaqso, iyo dhalidda waxay noqon doontaa mid sareeya.
Si geedo yar yar u caado qorraxda, waxay ku adag tahay dhowr maalmood - awoodda waxaa loo qaaday hawada furan, hooska.
Aad u muhiim ah waa meesha loo dego. Goobta ugu fiican waa meel xitaa iyo ugu iftiimiya iftiinka dhinaca koonfureed ama koonfur-galbeed. Waxaa lagu beeray kor-u-qaadis, laakiin keliya xaalad aan lahayn niyadjab iyo buruq.
Meelaha dhoobada ah iyo dhoobada, dhulka hoose ee hooseeya iyo meelaha qulqulaya ayaa la saarayaa (iyo sidoo kale geesaha hoose).
Markaad doorato meel, tixgelin xaqiiqda ah in faleebo qulqulaya ay tahay in la keeno array loo qoondeeyay duurka (taas oo ah, waa in aysan aheyn wax khasaare ah ama caqabado kale oo adkaynaya qoyaanka qoyaanka ee waddada cajalad).
"Vima Zanta" waxaa si sahlan loo aqbalaa iftiinka, carradu si fiican u qoyan - geedka ma uusan jecleysan ciidda saboolka ah. Wax-soosaarka ugu weyn waxaa laga saaraa duurka sii kordhaya on sandstones fudud ama carrada ciidda-loamy leh content humus ilaa 3%.
Cadaadiska ugu fiicani waa 5-6 pH, sidaas darteed xayawaanka alkaline sidoo kale waa la waayaa.
Ma taqaanaa? Waddada Koonfurta-Ural waxaa ku yaala xarun waxqabad la yiraahdo Strawberry.
Waxaa jira nuuc kale oo ku saabsan qaabka ciidda. Xaqiiqdu waxay tahay in kala duwanaanta noocani aysan u dulqaadan karin jiritaanka karbondurada xad-dhaafka ah ee dhulka (si kale loo dhigo, kalsiyum by-products).
Qoto dheer ee dhulka hoostiisa ayaa sidoo kale muhiim ah - waa in horay loo dhajiyaa in ka badan 1 mitir (dhaldhalaalka sii kordhaya ee sii kordhay ee xididdada).
Waa hagaag, haddii ka hor, goobta ayaa lagu koray dalagyada "saxda ah", kuwa horay loo soo dhajiyay, - iniin khardal iyo digir, daboolka iyo dhir.
Mawduuc kale oo muhiim ah - saarista wakhtiga ku habboon ee Bacriminta.
Haddii aad qorsheyneyso xagaaga ama xilliga dayrta, waxaa la sameeyaa ugu dambeyn hal bil ka hor, waqti isku mid ah oo qodaya. Kuwa ku jiri doona geedka berri guga waxaa lagula talinayaa inay qaadaan shaqo noocan oo kale ah bisha Sebtembar.
Marka qoyaan si qoto dheer oo leh xayndaab xajin leh 1 jibbaaran. Geedka mustaqbalka wax ku biirin:
6-8 kg ee compost ama humus;
80 g (ugu badnaan 100 g) ee superphosphate;
60 g oo cusbo ah potassium;
50 g of bacriminta nitrogen.
Isla markiiba ka hor beerashada, ciidda waxaa lagu nadiifiyaa xal aqueous of ammonia (40 ml 10% ammonia 10 litir oo biyo ah oo lagu daro 1 l oo saabuun).
Tiknoolajiyada xiisaha leh ee sii kordhaya strawberries, cayayaanka strawberries, sariiraha ee Ahraamta, sariiraha toosan, ee hidroponics, ee lagu koriyo ah.
Waayo, dalag weyn ayaa u baahan doona waraabin degdeg ah. Iyo doorbididda faleebo - duurka ma u dulqaadan qoyaan badan oo ku saabsan mass cagaaran.
Waxaad haysan kartaa qoyaanka adigoo rushaya sariiraha leh mulch - si saameyn ugu habboon, nidaamkani waxa la sameeyaa isla markiiba ka dib marka la beerto.
Baro sida mulch strawberries.
Waxaan hore u ogaanay in duurka noocan oo kale u dulqaad si fiican kulaylka. Sida jaantuska kale ee heerkulka, saafiyeyaasha iyo iibiyeyaashu waxay tilmaamayaan inta ugu yar "nolol ugu yar" inta udhaxeysa -22 ° S.
Waa muhiim! Marka ay koraan gobollada isbeddel ah oo isbeddel leh oo heerkulka jiilaalka ah, berry ayaa noqda mid biyo ah oo dhadhan ah.
Dabcan, tani waa xadka hoose, oo ay duurka u koraan waa in laga dhigaa meel ka baxsan oo yar yar, iyo qaboobaha barafka ah looma wareejiyo habka ugu wanaagsan (iyo sidoo kale tuubbooyin isdaba joog ah oo leh baraf ah).
Sidaa darteed, on aroortii of dhaxan ugu horreeya, dhirta waxaa lagu daboolay lakab qaro ah ee laamood gran ah ama irbadaha geed, dhadday ama caws. Caleenta cagaaran iyo kuwa duugoobay waxay isku dayaan inayan isticmaalin - waxay isticmaali karaan cayayaanka jiilaalka.
Agrofibre cufan oo soo jiidanaya duufaan yar ayaa sidoo kale caawiya - doorasho fiican ee jiilaalka cimilada diiran. Waxa ugu muhiimsan waa in dufka uusan taabanin baadiyaha, haddii kale waxay xakameyn doontaa.
Hoyga ayaan degdegin in sawirro laga qaado guga hore - marka lagu daro ilaalinta miraha soo noqnoqda ah, sida "koofi" waxay damaanad qaadeysaa midhaha hore (ururinta isu-ururinta 7-10 maalmood).
Bannaanka loo isticmaalo guryaha sida caadiga ah waxay ku shaqeeyaan laba siyaabood oo ah cawska quudinta - wareejinta rosette iyo qaybinta weelasha. Waxaa jira xulasho kale oo lagu heli karo duurka cusub ee abuurka, laakiin waxaa sabab u ah xoogga shaqaalaha ee loo isticmaalo si aad u yar.
Nidaamka ugu fudud ee cirbadaha transplanting:
Laga soo bilaabo geedka hooyada gooyay oo qodo godadka amarka hore.
Waa isla markiiba, dhulka, loo wareejiyo dalool cusub, halkaas oo bacriminta horey loo dhigay iyo biyaha ayaa la shubay. Xaaladdan oo kale, haraadiga ciidda waxay isku dayaan in aan la ruxin.
2-3 maalmood ee ugu horeysa sida delenka waxay noqon doontaa mid culus oo muuqaal ah, laakiin markaa way baxaysaa oo caleemuhuna way kici doonaan.
Ma taqaanaa? Magaalada Belgium, ee magaalada Vépyon, matxafka strawberry wuxuu shaqeynayey rubuc qarnigii koobaad.
Habka waa mid fudud, laakiin aad u nugul duurka, sidaas darteed Inta badan caanaha daaqsinka ee caan ah:
Qoorta shimbirta laga soo galo shoolada ayaa lagu meeleeyaa koobyo gooni ah (wakhtigaas, qanjaruufo bacriminta guud ee leh potassium, ammonia ama fosfooraska ayaa mar horeba loogu shubay weelka biyo diirran).
Dhowr maalmood gudahood, waxaa la sameeyaa xarigga kaas oo qaadan doona xididada ugu horreysa.
Kadibna waxaa loo wareejiyaa quraarad leh substrate dabacsan, qalalan iyo 5 maalmood oo isku xigta waxaa si ba'an loo qoyay (oo ah xaalad biyo ah).
Ka dib 7-10 maalmood ka dib, lakabka ugu sareeya ee ciidda waa la qalajiyey, daboolay mulch iyo diyaarisay shandad si ay u furaan dhulka.
Ka dib 45 maalmood ka dib bilawga shaqo ee noocaas ah waxay helayaan baadiyaha kala duwan.
Baro sida loo abuuro strawberries guga iyo dayrta, sida loo abuuro abuurka.
Waqtiga ugu haboon ee beeritaanka oo dhan ee furan waa:
haddii ay dhacdo guga - Abriil 15-Maajo 5 (meelaha koonfurta, waxaad bilaabi kartaa bartamaha bisha Maarso);
xilliga dayrta - July 25-September 5 (ama ilaa dhammaadka bishan).
Beeridda August waa ka fiican - ka hor xilliga qaboobaha geedo waxay yeelan doonaan waqti ay qaataan xididka iyo koraan xoog, iyo guga ee sanadka soo socda waxaa jiri doona beergooyska. Hase-yeeshee, wax-qabad noocaas ah looma oggola meel kasta: haddii goobta ay u furan tahay dhammaan dabaysha, iyo gobollada qaboobaha leh ee baraf yar, waxay u fiicantahay in la bilaabo shaqo guga. Haa, beergooyinku waa inay sugaan muddo dheer, laakiin duurka waxay yeelan doonaan waqti dheeraad ah si ay u degaan.
Waa muhiim! Ka hor inta beerto, mar kale si taxaddar leh u baaraan duurka - waa inay ahaadaan kuwo caafimaad qaba.
Nidaamka ugu muhiimsan ee dhulka u furan waa sahlan:
Dheemanka 7-10 cm oo qoto dheer ayaa la qodayaa sida waafaqsan nidaamka 35 x 45 cm (oo leh meerkuriga aagagga ay qaadanayaan 30 cm inta u dhaxaysa godadka iyo 40 cm roogga, laakiin aan ka yareyn, haddii kale baqaha ayaa si fudud u dhexdhexaadin doona).
0.5 l oo biyo ah ayaa lagu shubay mid kasta oo ka mid ah iyaga iyo bacriminta qaar ayaa la geliyaa (digada iyo compost qaybo siman leh oo lagu daro ash).
Xididdada geedo waxaa lagu rusheeyaa wadahadal carrada, ka dibna si toos ah loo dhajiyo oo lagu dhajiyo godadka, kuwaas oo si taxadar leh loo rusheeyey carrada (wadnaha waa in uu ahaado heer dhulka).
Ka dib markii dhulka la tamped gacmihiisa, waxaa la noqon karaa budada leh lakabka ah boodh ah peat 2-3 cm.
Qaar badan oo ka mid ah peat leh caws, dhadday ama cirbadaha geed - mulch tani waxay kuu ogolaaneysaa inaad xakamayso heerka qoyaanka waxayna ka hortagtaa soo baxa cayayaanka (iyo cudurro isku mid ah).
Ha iloobin hoyga, taas oo ilaalin doonta duurka ka soo dhaxaysa suurogalnimada.
Video: beeritaanka strawberry dayrta
Dhibaatooyinka koritaanka iyo talooyinka
Qaar badan oo ka mid ah asxaabteena, noocyada kala duwan ayaa weli ah mid cusub, oo mararka qaarkood keena dhibaatooyinka mawduuca.
Qaar ka mid ah, isku dayeen in ay koraan dhirta, ugu dambeyntii diidaan fikradda noocan oo kale ah, iyada oo ka dhigeysa la'aanta dhadhanka ee berry ah. Laakiin waxaan hore u ogaanay in midhaha "Vima Zanta", liddi ku ah, ay aad u dhadhan fiican, taas oo macnaheedu yahay in sababtu waa in loo raadsado xadgudubyada tiknoolajiyada daryeelka.
Inta badan qaddiyadaha noocan ah waxaa loo sameyn karaa sida soo socota:
xulashada goobta khaldan;
diyaarinta goobta aan ku filnayn;
la'aanta qoraallada "waraaqaha" marka la beerto;
seegaa marka la sameynayo siyaado xilliyeedka.
Ma taqaanaa? Arkaeologists waxay ku andacoodaan in strawberries duurjoogta ah ay ka muuqatay Yurub inta lagu jiro xilligii Neolithic (taas oo ah ugu yaraan 5.5 kun oo sano ka hor).
Iyadoo saddexda dhibcood ee hore, wax walba waa cad, laakiin la shaqeynta Bacriminta waxay u baahan tahay sharaxaad gooni ah.
Sidaas, codsiga guga, oo leh himilada koritaanka daaqsinka, isticmaal:
Nitrate kalsate - 2 tbsp. L. / 10 l oo biyo ah iyo 200 g ka yar baadiyaha ayaa soo celin doona dheelitirka lagama maarmaanka ah, ee lagu shaqeynayo xaashida 1 tbsp oo keliya. l.
boric acid - 1 g on baaldi isku mid ah, caleenta waxaa lagu buufiyaa leh buufin;
HOL iyo amooniyam - waxaa si gooni gooni ah loo qaataa, 2 tbsp. l on 10 l, waxaa la keenay 200-250 g hoos baadiyaha, ka dib markii waraabinta hordhac ah;
xaddiga isku midka ah ee kalluunka digaaga ama lo'da lo'da, si kastaba ha ahaatee, diirada ayaa ka duwan - 1:20 ama 1:10, siday u kala horreeyaan.
Xasuuso in labadii dhibcood ee ugu dambeeyay ay caadi ahaan qaataan duurka sanadka labaad iyo wixii ka dambeeya. Laakiin wakhtigu waa isku mid - ka dib marka gabadha ugu horeysa ee la jarayo cayayaanka hore ee caleenta ah iyo ka dib bilawga magacaabista peduncle.
Inta lagu jiro koriinka, Bacriminta oo aan samayn karin. Marka laga reebo waxaa loo sameeyaa duurka si ay u koraan carrada adag ama ku dhajisan khudaarta. Waayo, taageeradoodu waa ku habboon yihiin:
xaashida xaashida - "Atlanta" (30-50 ml / 10 litir oo biyo ah) ama "Raykat Final" (25-30 ml oo miisaan la mid ah);
xeryahooda asaasiga ah - Kaadiinka (15-20 mg / 10 l) ama Celik-K (50 ml).
Waa muhiim! Marka aad iibsanayso kiimikada iyo Bacriminta, baro qiyaasta iyo inta jeer ee codsiga - xogtan waa in lagu tilmaamaa xirmada ama xirmada.
Dhamaadka xagaaga, ash foornada waxaa lagu soo bandhigaa duurka iyo xannibaadda heerkulka 1 kg / 1 sq. m. Dad badan ayaa sidoo kale isticmaala sulfate-potassium (50 g / baal iyo 250-300 ml oo hoos miro). Waxa ugu muhiimsan xilligan - ha isticmaalin xayawaanka chloride.
Baro waxa la sameeyo oo la sameeyo dib u celi caleemaha, verticillous iyo fusarium wilt, spot brown, nematodes, weevils on strawberries.
Kaligiis, sida strawberry waxaa loo tixgeliyaa inuu u adkaysto cudurada waaweyn iyo cayayaanka. Laakiin xaafadaha kale ee dhaqamada kale waxay u horseedi karaan xaqiiqda ah in aan laheyn ka hortag iyo daryeel wanaagsan, baadiyaha "Vima Zanta" halis u tahay jirro.
Waxaanu qornaa dhibaatooyinka ugu caansan iyo hababka xalkooda:
Qamadi ciriiri. Waxay muujisaa lafdhabarta, cufan oo aad u culus iyo sariiro wershed ah. Baaxadda, iftiinka iyo dabacsanaanta leh mulching ma siin doonaa wakiilka fungus-sabab kasta fursad kasta. Iodine (10 dhibcood / 10 l oo biyo, todobaadkiiba la daweeyo) ama xalal khardal ah (50 g / 5 l oo biyo diirran leh leh faleebo 2 maalmood ah) ayaa loo isticmaalaa sida wakiilada cudurrada. Teldor iyo Chorus waxay ku habboon yihiin alaabta ganacsiga.
Macmacaanka macaanka. Maaraynta caleen leh xal daciif ah (midabka midabkeedu yahay) oo ah kiniinka potassium waxaa loogu talagalay in looga hortago muuqaalkiisa. Waqtiga muuqaalka kore ee cagaarka, kolloid kolloid ah ayaa sidoo kale loo isticmaalaa: 50 g oo baaldi ah 10% karbofos xal, oo leh laba goor oo daaweyn ah maalin kasta.
Si loola macaamilo caarada caarada, qaado diirran (+30 ° C) xal Carbofos - 3 tbsp. L. 10 l oo biyo ah. Dhirta waxaa laga waraabiyaa biyo waraabiyo, oo si adag u daboolaan filimka beeraha 3da saacadood ee soo socda.
Geed cusub oo la iibsaday waxaa lagu degi karaa caaro aan khafiif ahayn. Habka ugu fudud ee iyaga loola macaamili karo: geedo 10-15 daqiiqo ah ayaa biyaha lagu qoyan yahay kuleylka +45 ° C.
Slugs habeenkii, qoryaha iyo qafisyada ma geli doono sariirta beerta daboolay mulch.
Waxaad ku dhejin kartaa aduunka adoo ku waraabinaya duurka xal fudud (2 koob oo geed isbonji ah iyo 1 koob oo saliid ah gabbaldayaha ayaa lagu daraa 1 baaldi biyo ah).
Qalabka daaweynta ugu caansan waa sulphate copper, taas oo aan u dulqaadan karin inta badan cayayaanka. Xitaa kahor muuqaalka korniinka, waxaa lagu qasi karaa qaybo siman oo lime - waxay soo baxdaa isku dar ah Bordeaux, kaas oo lagu dabaqo caleemaha (laakiin aan ka badnayn 5 g baaldi).
Ma taqaanaa? Waxaa la og yahay in qaar ka mid ah Romans qadiimiga ah ku dubtay berry macaan. Laakiin strawberries waxay soo gashay dhaqanka iyada oo loo marayo dadaalada Moors, kuwaas oo ku yaalla qarniyadii dhexe ee degay Xeebta Iberian.
Sida aad arki karto, tallaabooyinka ka hortagga fudud waxay caawiyaan sidii loo ilaalin lahaa strawberries inta badan cudurrada iyo cayayaanka. Помимо весенних обработок, важна уборка сорняков, контроль и своевременная замена мульчи, удаление больных кустов, а также старых листьев - и тогда защитный эффект будет куда более ощутимым.
Hadda waxaad taqaanaa waxa Wima Zanta Berry yahay, sida muuqaalku u yahay, iyo sida loo koro mucjisada ah ee taranta oo ku saabsan qorshahaaga gaarka ah. Waxaan rajeyneynaa in macluumaadkani uu faa'iido u yeelan doono akhristeyaasheena waxayna awoodi doonaan inay la yaabaan qof kasta oo leh rikoodhka rikoodhka ee berry waaweyn. Oo ha laga yaabo in dhibaatada waddanku ku fiicnaado!
Strawberry Wima Zanta: dib u eegista beeraleyda
Iyo My Vim Zanta ma aha wax la mid ah sida sawirka. Cerruurta ugu horeysay waxay ahaayeen kuwo waaweyn, intiisa kale ee qallafsan laakiin aad u macaan. qaabka berry ah looma dhejiyo qoorta. iyo inta u dhexeysa qoorta iyo caarada, waxaad xitaa sheegi kartaa farta oo aan ahayn. sepal leh stem burburay leh dhibaato. Berry laftiisu ma socdo. Anigu iskuma kalsoonaan karo sabab kale qaateen sanduuqa oo dhan A +. SAM KUST BY DESCRIPTION. SHEET TALLAABADA LAMBARKA. WAXYAABAHA LAGU QAADO.
Waxaan kaliya oo aan Zumu ku keeni karaa suuq yar oo khariidad yar ah, haddii kale ... waxay lumisaa muuqaalkeeda.
Waxaan fiirin doonaa hal xilli oo dheeraad ah, Faa'iidooyinka noocyada kala duwan ee xaaladaheyga waa: Caleemaha la caleemo waa mid cadhaysan, sida haddii ay jirran tahay.
Sharafnimada - adagaanta jiilaalka wanaagsan, dhadhanka wanaagsan.